Soo Saaraha Xawaaraha & Gearbox Soo-saaraha, Alaab-qeybiye, Warshad - yareeyayaal, dixirayaasha dixiriga, dixiriga dixiriga, jaangooyooyinka meeraha, xawaare yareeyayaasha, kala-duwanayaasha, qalabka kala-baxa ah, qalabka biraha loo yaqaan 'spar bevel', gearboxes-ka, cagafyada, gawaarida xamuulka qaada, dixirka dixiriga
Xawaare yareeyayaasha waa tareenno marsho oo u dhexeeya mootada iyo xoogaa mashiin ah. Ujeedada soo-dejiyaha xawaaraha waa in la yareeyo rpm-ka la isugu gudbiyo labada dhibic dhamaadka. Xawaare yareeyayaasha ayaa qaata Xuddunta waxaa abuuray matoorka (gelinta) oo ku dhufo. Ta labaad, xawaaraha yareeyayaasha, sida magaca ka muuqata, ayaa yaraada xawaaraha (soosaarka rpm) ee soo gelinta si wax soo saarku u ahaado xawaaraha saxda ah.
Ereyga "gearbox" waa erey guud oo loo yaqaan 'train gear' oo u dhexeeya mootada iyo mashiin yar. Sidaa awgeed, dhammaan xawaaraha yareeyayaashu waa sanduuqyo.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan sanduuqyada gear ma yareeyaan xawaaraha gelinta. In kasta oo aysan ahayn wax caadi ah, sanduuqyada gawaarida ayaa dhab ahaan la dhajin karaa si loo kordhiyo xawaaraha gelinta. Ilaa iyo hada nooca ugu caansan ee gearboxesyadu waa kuwa xawaare yareeya, laakiin sax ma noqoneyso in la yiraahdo dhamaan gearboxyada waa xawaare yareeye.
Ka dukaameyso khadka tooska ah
WJ SERIES goos goos goos ah
Gooryaamo khaas ah oo loo yaqaan Greenhouse
Dixiriga dixiriga Inch Dimension Wpa